Semalt - Crawl ဒေတာဖြင့်သင်၏ Backlink ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ဖောင်းပွရန်နည်းလမ်းများ
Semalt - Crawl ဒေတာနှင့်သင်၏ Backlink ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ဖောင်းပွရန်နည်းလမ်းများ
ဂူးဂဲလ်သည်၎င်း၏သုံးစွဲသူများအား backlink များ၏အရေးပါမှုနှင့် ပတ်သက်၍ လပေါင်းများစွာကြာအောင် update လုပ်ခဲ့သည်။ သို့သော် backlink များသည်အောင်မြင်သော ရှာဖွေရေးအင်ဂျင် အဆင့်တွင်သော့ချက်ဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သတိပြုမိသည်။ သူတို့ကဂူဂဲလ်၊ Bing နှင့် Yahoo ဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်ဘလော့ဂ်များ၏အရေးပါမှုကိုဆုံးဖြတ်ရန်ကူညီသည်။ လူအများအပြားက visitors ည့်သည်များနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံရန်အတွက်တက်ကြွသောတက်ကြွသော backlink များကိုအသုံးပြုမည်၊ မလုပ်မည်ကိုငြင်းခုံကြသည်။ backlink များသည်သင့်အားအရည်အသွေးကောင်းသည့် web traffic ကိုသေချာစေသည်။ ဒါ့အပြင်သူတို့ကသင့်ဆိုဒ်၏လက်ရှိလင့်ခ်များကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်စောင့်ကြည့်ရန်ကူညီပေးသည်။
backlink data နှင့် crawl data ကိုပေါင်းစပ်ရန်အဘယ်ကြောင့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်ကိုနားလည်ရန်အချက်အချို့ကိုစစ်ဆေးကြည့်ကြစို့။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အဆင့်ကိုမည်သို့တိုးတက်အောင်လုပ်ရမည်ကိုနားလည်ရန်နှင့်အင်တာနက်ပေါ်တွင်သူတို့၏တန်ဖိုးကိုမြှင့်တင်ရန်မည်သို့သောလုပ်ဆောင်မှုများပြုလုပ်သင့်သည်ကိုနားလည်စေရန်ကူညီလိမ့်မည်။
ဒီနေရာတွင်က Igor Gamanenko မှပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထိပ်တန်း Semalt , ထိုတွားဒေတာနှင့်သင်၏ website ရဲ့ backlink ပရိုဖိုင်းဖောင်းပွဖို့နည်းလမ်းတွေဆွေးနွေးထားပါတယ်။
ကျိုးပဲ့သောစာမျက်နှာများနှင့် backlink အစီရင်ခံစာများနှင့်အတူသူတို့၏ backlinks များနှင့်အမှားအယွင်းရှိသည့်စာမျက်နှာများကိုအလွယ်တကူရှာပြီး 4xx နှင့် 5xx အမှားများသို့ပြန်သွားနိုင်သည်။ ဤပြissueနာကိုသင်ရှောင်ရှားလိုပါကသင်၏ကျောထောက်နောက်ခံများကိုမတူညီသောကဏ္intoများခွဲခြားသင့်သည်။ တနည်းအားဖြင့်ဆိုသော်သင်သည်စာမျက်နှာ ၂၀၀ ကိုအခြေအနေသို့ပြန်ယူနိုင်သည်သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏အခြေအနေကို ၃၀၁ သို့မွမ်းမံနိုင်သည်။ နောက်နည်းလမ်းမှာ၎င်းတို့ကိုအခြားအသုံးဝင်သောသက်ဆိုင်ရာစာမျက်နှာများသို့မဟုတ်ဆောင်းပါးများသို့ပြန်ပို့နိုင်သည်။
Backlinks နှင့်အတူ 2. အညွှန်းကိန်းမဟုတ်သောစာမျက်နှာများ
backlinks ပါ ၀ င်သည့် index မဟုတ်သောစာမျက်နှာများအားလုံးကိုစနစ်တကျပြန်လည်ပြုပြင်သင့်သည်။ အသုံးပြုသူများကိုအမှား ၂၀၀ သို့ပြန်ပို့သောစာမျက်နှာများကိုသင့်အားဆုံးဖြတ်ခွင့်ပေးသည်။ ဤပြproblemနာပေါ်လာပါကသင်၏စာမျက်နှာများကိုရည်ညွှန်းမည်မဟုတ်ပါ၊ သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်၏ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အဆင့်ကိုတိုးတက်အောင်သင်မလုပ်နိုင်ပါ။ အကယ်၍ သင်၏စာမျက်နှာများကိုရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များကရှာဖွေတွေ့ရှိစေလိုလျှင်၊ ရည်ညွှန်းချက်မရှိသောပြproblemနာကိုတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးဖြေရှင်းသင့်သည်။
၃။ URLs များကို Backlinks များဖြင့်ပြန်ညွှန်းခြင်း
၀ က်ဘ်ဆိုက်များသည် ၄ င်းတို့၏အပြင်အဆင်များနှင့်အကြောင်းအရာများကိုအချိန်နှင့်အမျှပြောင်းလဲပေးသည်။ သင့်လမ်းကြောင်းနှင့်အညီသင့် URL နှင့်၎င်း၏ဗိသုကာကိုပြောင်းလဲရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည် 301 အမှားတစ်ခုကိုပြသခဲ့လျှင်၊ ထိုအမှားဖယ်ရှားမချင်းသင့်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များကိုသင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုစာရင်းမသွင်းသင့်ပါ။ redirecting စာမျက်နှာပါ backlink သည်သိသာထင်ရှားသောပြnotနာမဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည်သက်ဆိုင်ရာပရိသတ်ကိုပစ်မှတ်ထားရန်၎င်း၏ settings ကိုပြန်လည်သုံးသပ်နိုင်သည်။ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်၏ရလဒ်များတိုးတက်စေရန်သင်၏အခွင့်အလမ်းများကိုတိုးမြှင့်ရန်ကျောက်ချစာသားကိုသုံးပြီးသေချာအောင်လုပ်ပါ။
4. Backlinks နှင့်အတူမိဘမဲ့စာမျက်နှာများ
မိဘမဲ့စာမျက်နှာများသည်သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုအသွားအလာများစွာမောင်းနှင်နိုင်သည်။ သို့သော် ၀ က်ဘ်စီမံကွပ်ကဲသူများက၎င်းတို့ကိုမကြာခဏမေ့သွားတတ်ပြီး visitors ည့်သည်များကို ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်အတွေ့အကြုံနည်းပါးစေသည်။ သင်မိဘမဲ့စာမျက်နှာများကို backlinks တစ်ခုနှင့်တစ်ခုပြန်လည်ကြည့်ရှုသင့်သည်၊ စာမျက်နှာအားလုံးသည်ပရိသတ်အတွက်တန်ဖိုးရှိကြောင်းသေချာစေရန်။
5. Backlinks နှင့် URL ကိုတားမြစ်ပါ
အချို့သော backlinks များပါသောတားမြစ်ထားသော URL များအားလုံးသည် robots.txt ဖိုင်တွင်ဖော်ပြထားသောစာမျက်နှာများကိုမီးမောင်းထိုးပြသည်။ ဤပြissueနာရှိသည့်စာမျက်နှာများသည် the ည့်သည်များအတွက်ပြproblemsနာဖြစ်စေနိုင်ပြီးအရေအတွက်အားများစွာလျော့ကျစေသည်။ သင်၏ robots.txt ဖိုင်မှဖယ်ရှားခြင်းအားဖြင့်စာမျက်နှာများကိုတွားသွားနိုင်သည်။
၆။ Meta Nofollow စာမျက်နှာနှင့် Backlinks
Meta Nofollow with Backlink ၏အစီရင်ခံစာတွင်၊ meta tags များမပါရှိသောစာမျက်နှာများကိုဖော်ထုတ်နိုင်ပြီး၎င်းတို့တွင်ရှိသောအမှားများကိုထောက်ပြနိုင်သည်။ သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်မှမလိုအပ်သော tags များကိုဖယ်ရှားခြင်းဖြင့်ပြtheနာကိုသင်ဖြေရှင်းနိုင်သည်။ သင်၏ site ၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ကြည့်ရှုနိုင်မှုကိုတိုးတက်စေရန်သင့်တော်သော plugin တစ်ခုကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။